Hirao ny hira fandrotsirotsiana ho fiarovana ny teny Butchulla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2015 6:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, English, မြန်မာ, Ελληνικά, русский, Aymara, 日本語, Italiano, Deutsch, Català, 繁體中文, English
Nosy Fraser avy amin'ny EVC2008. Zon'ny mpamorona, CC BY-NC-ND 2.0 license.
Mampiseho ny porofo hita tao amin'ny Nosy Fraser miorina ao Queensland, Aostralia fa mety misy mponina teratany tao efa 5000 taona lasa izay. Nantsoin'ny tompontany nentim-paharazana, ny vahoaka Butchulla, hoe K'gari midika hoe “paradisa” ny nosy sy ireo zavaboary mahatalanjona manodidina azy.
Na izany aza, niatrika zava-tsarotra ny Buchulla taorian'ny fahatongavan'ny mpanjanaka, izay niafara tamin'ny famindrana toerana azy ireo.
Nijaly ihany koa ny teny Butchulla nandritra izany fotoana izany, izay nitarika ny fahafatesany tamin'ny taonjato faha-20 noho ny politikan'ny fitondram-panjakana sy ny vondrona misionera nandràra ny teny.
Noho ny ezaka famelomana indray ny teny ataon'ny Fandaharan'asa Momba ny Teny Butchulla, tafaverina ankehitriny ny fiteny. Namokatra fitaovana vaovao tahaka ny rakibolana, hira amin'ny kapila mangilatra (CD) sy hetsika nomanina tahaka ny fianarana ny teny any amin'ny trano famakiam-boky ao an-toerana ny fandaharan'asa, izany rehetra izany dia manampy amin'ny fandrisihana ny tanora ho liana amin'izany.
Mandray anjara amin'izany ezaka fameloma-teny izany ihany koa ny haino aman-jery nomerika sy ny aterineto. Ao anatin'ny tetikasa ABC Open “Tenin-dreny“, miara-miasa amin'ireo mpamokatra lahatsary avy ao amin'ny Australia Broadcasting Corporation ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana mba hamoronana lahatsary ifarimbonana mifantoka amin'ny famelomana indray ny teny teratany.
Notontosaina teo amin'i Joyce Bonner, mpahay tenim-piarahamonina miaraka amin'ny Korrawinga Aboriginal Corporation ao amin'ny faritry ny Oalan'i Hervey, sy ny mpamokatra ny ABC Open Brad Marsellos ny lahatsary tahaka ity. Niara-namorona ity lahatsary mizara hira nentim-paharazana fandrotsirotsiana ankizy amin'ny teny Butchulla hirain'ny renin'i Bonner ity izy ireo.
Maso kely roa mijery an'Andriamanitra
Maso kely roa mihaino ny teniny
Lela kely iray miteny ny marina
Matoria ry zaza kely matoria
Niara-niasa ihany koa ny ekipa mba hamokatra lahatsary hafa mampianatra ny voambolana Butchulla momba ny faritra amin'ny vatana :
Ampahany amin'ny tetikady famelomana indray ny teny Butchulla ireo lahatsary ireo. Vakio eto ny antsafa niarahana tamin'i Bonner momba ny fiandohana sy ireo zavatra norisaina nampahomby ny Fandaharan'asan'ny Teny Butchulla
5 andro izayOseania